နို့မှုန့်ဝယ်မတိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် နို့မှုန့်ဗူး(၁၀၀၀)ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ….. – Cele Snap
နို့မှုန့်ဝယ်မတိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် နို့မှုန့်ဗူး(၁၀၀၀)ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…..
April 24, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေဟာဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာတိကျပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပါးချိုင့်လေးက ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်..။ခိုင်နှင်းဝေဟာဆိုရင် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက လေးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သူမက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘမဲ့ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ခိုကိုးရာအဖြစ် မိဘမဲ့ဂေဟာကိုလည်း တည်ထောင်ထားသလို လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်းသူမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဖေးမကူညီလှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း နှို့မှုန့်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ လက်ဖက်ရည်များဖျော်တိုက်နေရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူမတတ်နိုင်သလောက် နို့ဗူး(၁၀၀၀)ကို ကိုယ်တိုင်သွာရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို ခိုင်နှင်းဝေက အခုလိုပဲသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ပရိတ်သတ်ကို အသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
ခိုင်နှင်းဝေက ” နို့မှုန့် ဗူး (၁၀၀၀) အလှုလေးပါရှင်.. နို့မှုန့်အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့် လက်ဖက်ရည်များ ဖျော်တိုက်နေရသည်ဟု ကြားရသောကြောင့် ကျမ ကလေးတွေ အတွက် စုဆောင်းထားသော နို့မှုန့်များနှင့် Nature One မှ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးသော နို့မှုန့်ဗူးများ စုပေါင်းကာ နို့မှုန့် အခက်အခဲဖြစ်နေသော ကလေးများ၊ ကမာရေး မကောင်းသော ကလေးများ အား တစ်ဦးလျှင် (၂) ဗူး နှုန်းဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် ဝေမျှ လှူဒါန်းသွားပါမည်ရှင်..🙏🙏🙏….(စုဆောင်းထားသမျှ ဒီလို အချိန်မှာ စားလောက်ရုံထားပြီး ဝေမျှ ခြင်းမှာ မိမိ တစ်ဦးထဲ အဆင်ပြေနေတာ မလိုချင်ပဲ အခက်အခဲဖြစ်နေသူများအား ကိုယ်ချင်းစာ ၍ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..)..” ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်ရှိပြီး စိတ်ကောင်းရှိလွန်းတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက် ဒီထက်မကလှူဒါးနိုင်ပြီး စိတ်ကောင်းရှိသလောက် အောင်မြင်မှုတွေရ၇ှိပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆိုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…။
Source; Khine Hnin Wai’s Facebook acc
ပရိတျသတျကွီးရေ… ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ပရဟိတမငျးသမီးခြောလေး ခိုငျနှငျးဝဟောဆိုရငျ အနုပညာလောကမှာ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ကရြာဇာတျရုပျမှာတိကပြိုငျနိုငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ.။အပွုံးခြိုခြိုလေးနဲ့ ထငျရှားတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးက ပရိတျသတျတှအေတှကျတော့ သူမရဲ့ထူးခွားတဲ့ အခကျြတဈခကျြဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူးနျော..။ခိုငျနှငျးဝဟောဆိုရငျ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျးလုပျဆောငျနတောကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကေ လေးစားနကွေတာပဲဖွဈပါတယျနျော..။
သူမက အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မိဘမဲ့ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယျလေးတှအေတှကျ ခိုကိုးရာအဖွဈ မိဘမဲ့ဂဟောကိုလညျး တညျထောငျထားသလို လကျရှိအခွအေနတှေကွေောငျ့ စားဝတျနရေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှကေိုလညျးသူမတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ဖေးမကူညီလှူဒါနျးပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး နှို့မှုနျ့အခကျအခဲဖွဈနလေို့ လကျဖကျရညျမြားဖြျောတိုကျနရေတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ သူမတတျနိုငျသလောကျ နို့ဗူး(၁၀၀၀)ကို ကိုယျတိုငျသှာရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့အကွောငျးလေးကို ခိုငျနှငျးဝကေ အခုလိုပဲသူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ ပရိတျသတျကို အသိပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော…။
ခိုငျနှငျးဝကေ ” နို့မှုနျ့ ဗူး (၁၀၀၀) အလှုလေးပါရှငျ.. နို့မှုနျ့အခကျအခဲဖွဈနသေောကွောငျ့ လကျဖကျရညျမြား ဖြျောတိုကျနရေသညျဟု ကွားရသောကွောငျ့ ကမြ ကလေးတှေ အတှကျ စုဆောငျးထားသော နို့မှုနျ့မြားနှငျ့ Nature One မှ ဝိုငျးဝနျးလှူဒါနျးပေးသော နို့မှုနျ့ဗူးမြား စုပေါငျးကာ နို့မှုနျ့ အခကျအခဲဖွဈနသေော ကလေးမြား၊ ကမာရေး မကောငျးသော ကလေးမြား အား တဈဦးလြှငျ (၂) ဗူး နှုနျးဖွငျ့ တတျနိုငျသလောကျ ဝမြှေ လှူဒါနျးသှားပါမညျရှငျ..🙏🙏🙏….(စုဆောငျးထားသမြှ ဒီလို အခြိနျမှာ စားလောကျရုံထားပွီး ဝမြှေ ခွငျးမှာ မိမိ တဈဦးထဲ အဆငျပွနေတော မလိုခငျြပဲ အခကျအခဲဖွဈနသေူမြားအား ကိုယျခငျြးစာ ၍ ဖွဈပါတယျရှငျ..)..” ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..။ကိုယျခငျြးစာစိတျအပွညျ့ရှိပွီး စိတျကောငျးရှိလှနျးတဲ့ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျ ဒီထကျမကလှူဒါးနိုငျပွီး စိတျကောငျးရှိသလောကျ အောငျမွငျမှုတှရေရှိပိုငျဆိုငျပါစလေို့ဆိုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…။
ကြွေသွားတဲ့ပန်းလေးတွေကို အားနာရသလို အမှန်တရားဘက်မှာရပ်တည်ခဲ့တာမို့ လိပ်ပြာသန့်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ချယ်ရီသင်း…..
အလှူရှင်များနဲ့စုပေါင်းကာ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀)စာအတွက် စားသောက်ကုန်များ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း…..
သူမတို့သားအမိနှစ်ဦးကို နွေးထွေးလုံခြုံမှုတွေပေးနေတဲ့ ချစ်သူကို ချစ်သမီးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
သူမကို ရစရာမရှိအောင်သိက္ခာချထားတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဖွင့်ချရင်းပေါ်တင်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
သူမအပေါ် သူငယ်ချင်းလို ညီအစ်မလို အစစအရာရာတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ မိခင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
သူမရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးပရိတ်သတ်တွေကို ချပြလာခဲ့တဲ့ L ဆိုင်းဇီ
သူမလိုပညာမတတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင် နောက်မျိုးဆက်လေးတွေအတွက် ကျောင်းဆောင်လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး